Sixirka iyo isha maxay kala yihiin caddeyn
Sixirka iyo isha farqi weyn baa u dhexeeya, waxaad ogaan kartaa marka aad akhriso mid kasta wuxuu yahay, marka hore sixirka waa fal qofka uu samaynayo isagoo adeegsanaya shayaadiinta wuxuu sameeyaa qoraallo ay qofku amreen shayaadiinta markaas ayuu filinayaa, wuxuu ku fulinayaa qofka loogu talagalay in wax lagu gaarsiiyo, dadka sixirka sameeyaa waxay sameeyaan wax kastoo uu shaydaanka ku farxo oo gaalnimo ah la mid ma aha sixirka isha, sixirka waa lagu gaaloobayaa marka uu wato waxyaalaha shirkiga ah ama waxyaalaha lagu bannaysanayo waxa xaaraanka ah.
laakin isha waxaa laga wadaa in qofka uu si xun u fiiriyo isagoo raba inuu waxaas isaga helo isagoo aysan ka ahayn ninkan wax yeelo gaarsii sida badan dadka qaarkii ayaa ishooda xoog leh oo marka ay wax fiiriyaan ishooda gaarta waxyaalaha ay fiirinayaan, waxaa kaloo jira dad xaasidiin ah oo aan u rabin qof inuu wax helo markaas ayay rabaan ninkan inuu waayo waxyaalaha uu helay taasna waxay keentaa in isha ay qofka saamayso.
sidee la isaga ilaaliyaa il banii aadam?
qofka wuxuu isaga ilaalin karaa isha iyo sixirka inuu ka fogaado meelaha ay ka soo gaari karaan sidoo kale inuu badsado xijaabka ayaadaha qur'aanka gaar ahaan macawidateenka labadaas suuro waxay ku soo dageen nabiga naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaatee marka la sixiray, waxaa sixray nin yahuud ahaa marka Alle uu soo dejiyay oo lagu uu akhriyay sixrka wuu burburay.
qofka saaxir u taga xukunkiisa waa maxay?
ruuxa u taga qof sixirka sameeya oo waydiista inuu sixir u sameeya hadduuna arrintaas jaahil ka ahayn gaal ayuu noqonayaa waayo wuxuu raalli ku yahay in Ilaahay lagu gaaloobo isagaana sabab u noqonaya falkaas in loo sameeyo